About of Teabrary | Strong Source Holding Co., Ltd
About of Teabrary
ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက် Teabrary ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ August လ 11 ရက်နေ့မှာ Soft Opening နဲ့ 18 ရက်နေ့မှာ Grand Opening အဖြစ် Times City မှာရှိတဲ့ Citywalk Foodies မှာ အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ 2018 ခုနှစ် December လ တည်းက ဟောင်ကောင်နိုင်ငံမှာ Tea ထုတ်လုပ်ရေး၊ လေ့လာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး နှစ်ပေါင်း 30 ကျော် အတွေ့အကြုံပြည့်ဝတဲ့ ဗီယက်နမ်စစ်ပြန်တွေကို ဖွဲ့စည်းပြီး စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Teabrary မှာ Tea အမျိုးအစားပေါင်း 40 ရဲ့ အရသာတွေကို သောက်သုံးသူတိုင်း ထိထိမိမိခံစားမိမှာပါ။
Teabrary ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်က Tea နဲ့ Library ကို ပေါင်းစပ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး ရည်မှန်းချက်ကတော့ အများထက်သာလွန်ပြီး ခေတ်နဲ့အညီ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး Tea တွေကို ဖန်တီးထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး Tea နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေကိုပါ သောက်သုံးသူတွေလက်ထဲ အရောက်ပို့ပေးနိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Teabrary မှာ အရွယ်အစားအရ Medium နဲ့ Small ခွဲခြားထားပြီး Premium Tea, Frappe, Tea Presso, Fresh Fruity, Signature Dessert Series, Artisanal Crafted Dessert Tea, Cold Brew Tea, Cheesiato, Specialty Tea & Teabrary Cafe ဆိုပြီး အမျိုးအစားခွဲထားတဲ့အပြင် Topping အတွက် Golden Pearl, Brown Sugar Pearl, Lemon Grass Jelly, Pudding, Creme Cheese, Taro Paste, Taro Balls နဲ့ Konjac Jelly Ball တွေထဲက ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Topping ကို ရွေးချယ်သောက်သုံးနိုင်မှာပါ။
နေ့စဥ်နေ့တိုင်း လန်းဆန်းတက်ကြွပြီး ဆန်းသစ်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေ ဖန်တီးနိုင်ဖို့ Teabrary ရဲ့ Drink လေးတွေကိုသာ အားကိုးလိုက်ပါ။
Teabrary Product Menu
❤️ Teabrary Product Menu ❤️
No. 22, Citywalk Foodies, Between Jewellery Mall & Office Tower (3), Ground Floor, Times City Complex, Hanthawaddy Road, Kamayut Township, Yangon.
☎ – 09 799 582 222
အသေးစိတ်သိလိုတာများကို Teabrary Official Facebook Page တွင်လည်း ဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။